Voces Bolivianas: Mibilaogy momba ny fitroarana ara-tsosialy · Global Voices teny Malagasy
Voces Bolivianas: Mibilaogy momba ny fitroarana ara-tsosialy
Voadika ny 15 Novambra 2018 4:36 GMT
Niatrika fotoan-tsarotra i Bolivia tato anatin'ny volana vitsy. Tamin'ny 11 septambra tao an-tanànan'i El Porvenir, 20 kilaometatra eo ho eo ivelan'ny tanàna renivohi-paritany Cobija, ao amin'ny faritanin'i Pando, dia nisy ny valalamanjohy nahitana mpikambana teo amin'ny 1000 avy ao amin'ny Federasionan'ny Mpiasa Mpamboly ao Pando (FUTCP) sy ny fianakavian'izy ireo nanao diabe nankany an-drenivohitra. Mpanohana an'i Evo Morales izy ireo, manao diabe mba haka indray ny biraon'ny governemanta izay nobodoina sy nalain'ireo andian-jiolahy mpomba ny fasista manohitra ny governemanta.
Notratrarin'ny andian-jiolahim-boto mitam-piadiana ankodimirana ny valalamanjohy, voatifitra basimarovava ny maro tamin'izy ireo, ary voatifitra teo an-damosina sy teo amin'ny loha ireo mpikambana ao amin'ny FUTCP. Olona 30 no maty, anisan'izany ireo vehivavy sy ankizy ary mbola tsy hita ny 100. Raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ity loza ity dia vakio ity tatitra ity.
Cristina Quisbert naneho ny hatezerany tao amin'ny Bolivia Indigena Blog [es]:
Tsy eto aminay intsony ankehitriny ny rahalahinay Wilson Quispe Castillo, Alfonso Cruz Quispe, Jhonny Cori Sarzuri, mpianatra ho mpampianatra. Nianatra tany La Paz sy Pando izy ireo. Niharan'ny famonoana ny Hoavy ihany koa izy ireo.
Mila ny rariny izahay! “Tokony ampiharina ny rariny” no fangatahan'ny havany. (dikan-teny tamin'ny milina)
Naneho ny fahatezerany tamin'ity fanavakavahana ity izy:
Na ny oniversite na ny fiarahamonina dia samy tsotra loatra ka nino ireo tantara mirediredy sy diso nataon'ny sasany tamin'ireo media sy tompon'andraikitra tamin'ity heloka bevava ity. Tsy naneho firaisankina fotsiny tamin'ny fianakavian'ireo niharam-pahavoazana ny fiarahamoninay, fa koa mpanara-maso mazoto amin'ny fizotry ny fitsarana mandeha amin'izao fotoana.
Habibian'ny fitondrana jadona sy fasista ireo olona midaroka sy mamono ny tantsaha sy ny Indianina.
Nanambara firenena latsaka an-katerena ny governemanta Boliviana mba hiatrehana ny korontana. Vakio ny fitantaran'ny Global Voices amin'ny antsipiriany:
Cristina Quisbert mitatitra hoe:
Ny 13 Oktobra no nanomboka ny diabe miainga avy ao an-tanànan'i Caracollo mankao ao amin'ny Kongresy ao La Paz. Taorian'ny dia an-tongotra 7 andro, tonga tao an-tanànan'i El Alto androany ny diabe nahitana olona tompotany, tantsaha, fikambanana ara-tsosialy.
Eduardo Avila manome fanavaozam-baovao tato amin'ny Global Voices:
Tantsaha, mpitrandraka, mpamboly coca, ary mpanohana hafa ny governemantan'i Evo Morales an'aliny no tonga tao La Paz tamin'ny alatsinainy. Niafara toy ny fankalazana ilay natomboka tany am-boalohany ho diabe hanerena ny Kongresy Boliviana handany lalàna mitaky fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny fankatoavana ny volavolan-dalàmpanorenana rehefa tonga tamin'ny marimaritra iraisana ny mpanao lalàna, ary toa nandamina ny firenena.
Mario Durán ao amin'ny Palabras Libres dia iray amin'ireo mpanao gazety olon-tsotra mavitrika mampiditra sary am-polony sy manome ny heviny manokana ao amin'ny bilaoginy, manamarika fa toy ny “tsunami” ny onjan'ny olona.
Miguel Centellas ao amin'ny Pronto kosa faly fa voavaha tamin'ny fomba ara-dalàna ny olana ary “dingana iray manan-danja mankany amin'ny ara-dalàna” izany.
Ahitana tatitra momba ireo bilaogera Voces Bolivianas tahaka an'i Sandro, Hugo Miranda Cristina Quisbert izay mitantara ny zava-nitranga ny fitsidihany.
Jereo ny horonan-tsarin'ny hetsi-panoherana ao amin'ny fantsona YouTube an'i Hugo Miranda ary jereo ihany koa ny pejy Flickr Voces Bolivianas raha mila sary hafa.
Mario Duran nilaza fa tokony hampiasa fitaovam-pampitam-baovaon'olon-tsotra tahaka ny finday i Bolivia raha navoaka tao amin'ny fivorian'ny parlemanta ireo mpanao gazety avy amin'ny fahitalavitra tao an-toerana.
Cristina nandefa lahatsary ary nanoratra momba ny fahombiazana:
Eny, Eny ny Lalàm-panorenana … Ho an'i Bolivia mendrika …
Ampahany amin'ny taratasin'ny hira omaly nihiaka ny 20 Oktobra avy amin'ireo mpanao diabe izay nidina teny an-dàlana Kollasuyo nihazo ny kianjan'ny La Paz, Plaza Murillo izany.
Hugo Miranda mampahafantatra antsika ny fisantarana andraikitra Boliviana, hevitra avy any Santa Cruz, izay mikendry ny hanentana momba ireo fomba fiteny, asa sy fihetsiketsehana samihafa ataon'ny olona mikasa ny hampivelatra ny fiarahamonina iainan'izy ireo.
Rock Boliviano mitanisa ireo pejy tranonkala vaovao sasany an'ireo tarika rock vaovao Boliviana.
Ankoatra ny fibilaogina momba ny diabe, mampahafantatra ny mozika sy dihy Tarqueada amintsika i Cristina:
Ity dihy ity dia antsoina hoe Tarqueada ary matetika andihizana any amin'ny faritra ambanivohitra. Avy ao an-tanànan'i Tihuanacu ao La Paz, Bolivia ity vondrona ity. Nisy fetibe mozika sy dihy teo amin'ny tendrombohitra omaly, izay antsoina hoe Kimsa Chata, midika hoe “tendrombohitra telo miaraka”. Kimsa amin'ny teny aymara dia midika hoe telo ary ny chata midika hoe miaraka. Niaraka tamin'ireo aymara indizeny avy amin'ny firenena telo, Bolivia, Però ary Shily ny fetibe. Tamin'ny vanim-potoana fahiny, iray ihany ny aymara, saingy tamin'ny famoronana ny repoblika, dia nizara ho telo izahay.
Manoratra momba ny fitsidihana ny nosy Moon ao amin'ny Farihy Titicaca ihany koa izy.
Mandritra izany fotoana izany tao El Alto, nanohy nitarika atrikasa ny Voces Bolivianas mba hampianatra ny olona ny fomba fibilaogina. Ny asabotsy 11 Oktobra, dia nisy atrikasa natao tao amin'ny cybercafe iray izay nampianatra fikafika sasany, html, fomba fampiasana sary sy horonan-tsary hanatsarana bilaogy.
Nampahafantatra tetikasa hafa nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, Nari Jibon avy any Bangladesh tamin'ireo bilaogerany ihany koa ny Voces Bolivianas.
Ireto ny sarin'ny Virginio Sandy izay naseho tao amin'ny BarCamp farany tao El Alto.
Sary avy amin'ny Voces Bolivianas